Gabadhii muslimtay buuq la xiriira oo baarlamaanka Talyaaniga ka dhacay - Tilmaan Media
Xildhibaan ka tirsan garabka midig ee dalka Talyaaniga ayaa canaanweyn la kulmay Arbacadii kaddib markii uu “Argagixiso cusub” ku tilmaamay haweeney da’ yar oo u dhalatay Talyaaniga, taasoo diinta Islaamka qaadatay intii ay afduubka u heysteen koox Soomaali ah.
Hase ahaatee, sii hayaha xilka guddoonka shirka baarlamaanka, Mara Carfagna, ayaa durba si dhakhso ah hadalka uga xiray Pagano, isagoo dhahaya: “Adeegsiga erayga ‘argagixiso cusub’ waa khalad, gaar ahaan golahan dhexdiisa”.
“Qof walba oo faafinaya warar ku saabsan gabdhaas, ha sheego in in iyadoo 23 jir ah lagu afduubtay Kenya, lagu khasbay inay dhul howd ah ku lugeysto sagaal saacadood maalintii, oo waliba qori caaraddiis lagu khasbayay,” ayuu yiri Conte oo ka jawaabayay su’aal laga weydiiyay hadallada naceybka ah ee laga faafinayo haweeneydaas.
Booliska ayaa loo yeeray kaddib markii la sheegay in galaas dhalo ah lagu tuuray guriga ay iyada iyo qoyskeeda ka daggan yihiin magaalada Milan.
Caa’isha Romano oo waxay aheyd samafale ka howgeli jirtay xarun lagu daryeelo carruurta agoonta ah oo ku taalla koonfur bari ee Kenya.
Koox hubeysan ayaa bishii November ee sannadkii 2018-kii ka afduubatay halkaas, waxaana loo kaxeystay dhinaca Soomaaliya, waxaana la rumeysan yahay in kooxdii afduubka geysatay ay ka tirsanaayeen Al Shabaab.
Romano markii ay Rome ka degtay waxaa soo dhoweeyay oo laabta geliyay waalidkeed iyo walaasheed, waxaana salaamay Ra’iisul Wasaaraha Talyaaniga iyo wasiirka arrimaha dibadda xilli ay qabtay dhar ku xijaaban.
Markii ay gaartay magaaladii ay ka soo jeedday ee Milan waxay sheegtay in kooxdii afduubatay ay si wanaagsan ula dhaqmeen isla markaana ay xushmad u muujiyeen.